Brighton & Hove Albion oo Garoonkeeda ugu Awood Sheegatay Manchester United Kulan ka tirsan Premier League – Gool FM
( Premier League ) 19 Agoosto 2018. Naadiga Brighton ayaa guul muhiim ah ka gaartay Manchester united kaddib markii ay kaga badiyeen 3-2.
Qeybta hore kulanka ayaa lagu kla nastay 3-1 oo ay ku hor kaceysay kulanka naadiga Brighton waxaana u daah furay goolka kowaad laacibka Glenn Murray daqiiqadii 25-aad kaddib kubbad diiba aheyd uu goolka ku dhameystiray.
Laba daqiiqo kaddib Brighton ayaa la timid goolka labaad kasoo ahaa kubbad rogaal celis aheyd oo marka hore ay iska difaaceen kooxda United balse markii dambe uu ka dhaliyay xiddiga Shane Duffy.
Kulanka oo socda saacad barkeed Romelu Lukaku ayaa gool usoo celiyay Manchester united markii uu madax ku dhameystiray kubbad aad la isugu qabsaday goolka Brighton.
Balse kulanka oo qeybta hore gabagabo ku dhaw united ayaa laga dhaliyay goolka seddaxaad kasoo ahaa rigoore uu qaladkeeda galay Eric Bailly waxaana fursadii goolku laadka aheyd u dhaliyay Brighton cayaariyahanka Pascal Gross.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe United ayaa sameysay isku dayo ay dhanka ka weerareen kooxda ay martida u ahaayeen.
Markale bilaawga qeybta hore daafaca Man United ee Eric Bailly ayaa halis ku galay in laga xoogo kubbad taasoo uu si qalqal ah ugu dambeyn ku baasay.
United ayaa dhan walbaa kaga wanaagseed kubbada dhigeeda Brighton balse wey ku adkaatay inay la yimaadaan barbaraha goolasha lagu hogaaminayo.
Isku day kastaa oo ay sameeyaan cayaariyahanada Manchester united ayaa ahaa mid ku fashilmayay Daafaca kasoo horjaada iyadoo ay yareed kubbada uu badbaadiyay goolhayaha Brighton.
waqtigii dheeriga ee lagu daray kulanka ayaa rigoore loo dhigay kooxda United markii qalad lagu galay Marouane Fellaini waxaana gool kulaad u dhaliyay Paul Pogba oo xili aan ku haboonin Red Divels ka badbaadin waayay Guuldarro.
Ugu dambeyna kulanka ayaa kusoo idlaaday 3-2 oo ay guusha ku raacay kooxda Brighton & Hove Albion.
Canuga uu Silva kor u hayo waa wiilkii uu dartiisa........+SAWIRRO